मतगणना सकिएपछि के गरिन्छ मतपत्र ? • Nepal's Trusted Digital Newspaperमतगणना सकिएपछि के गरिन्छ मतपत्र ? • Nepal's Trusted Digital Newspaper
तपाईँले मतपत्रमा स्वस्तिक छाप लगाएपछि तपाईँ घर फर्कनुहुन्छ । तपाईँ घर फर्केपछि रेडियो टिभीमा नतिजा हेर्न सुरु गर्नुहुन्छ । तपाईँले दिएको मतले कसैको जीत हुन्छ त कसैको हार हुन्छ । त्यति धेरै मतपत्र केमा प्रयोग हुन्छ भन्ने कौतुहलता हुनु स्वाभाविक नै हो । आज हामी त्यही मतपत्र केन्द्रीत रहेर केही कुरा भन्नेछौँ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनका निम्ति निर्वाचन आयोगले दुई करोड सात लाख वटाभन्दा केही बढी मतपत्र छापेको थियो र तिनै मतपत्रबाट जनमतको छिनोफानो गर्ने काम अहिले भइरहेको छ । गणना गरिसकेपछि मतदाताले छाप लगाएका र बाँकी रहेका मतपत्र के गरिन्छ भन्ने तपाईँलाई थाहा छ कि छैन ? प्रस्तुत प्रश्न हामीले माथि नै सोधिसकेका छौँ ।
निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार गणना गरिएका मतपत्रहरू केही समयका लागि सुरक्षित राखिन्छ । यद्यपि प्रयोग नभएका मतपत्रहरू जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा नष्ट गरिन्छ । छाप लगाइएका मतपत्रहरूलाई मुद्दा पर्ने अवधिसम्म नष्ट गर्न मिल्दैन । किनकि परिणाम चित्त नबुझेको वा उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी विषयमा मतपरिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र उजुरी दिन पाउँछन् । मुद्दा परेको खण्डमा मतपत्रलाई प्रमाणस्वरूप राखिन्छ । त्यसरी राखिएका मतपत्रहरू मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म सुरक्षित राख्नुपर्छ । उजुरी नपरेका मतपत्रहरू चाहिँ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले सम्बन्धित जिल्लामै नष्ट गर्ने चलन वा नियम रहेको छ ।
मतपत्र नष्ट गर्ने प्रक्रियालाई धुल्याउने भनिन्छ । निर्वाचनमा प्रयोग भएका अन्य कागजहरू यसरी नष्ट पार्दा निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधिहरू साक्षी बस्छन् ।
सरकारी कागजातहरू धुल्याउने नियमहरू २०२७ का अनुसार “धुल्याउनु“को अर्थ सरकारी कार्यालयमा रहेको कागजपत्रमा लेखिएका ब्यहोरा पढ्न, बुझ्न र त्यसको कुनै उपयोग गर्न नमिल्ने गरी रद्द गरिनु हो । वि.सं. २०७० सालमा भएको संशोधन भएको नियममा उक्त शब्दले कागजलाई आगोमा डढाउने बुझाउने उल्लेख गरिएको छ । धुल्याउनुको शाब्दिक अर्थ “धुलो पार्नु“ हुन्छ ।
हुन त त्यसरी कैयौँ क्विन्टल कागज आगो लगाउँदा पर्यावरणमा ठूलो असर पर्छ । त्यसैले अब त आयोगले विकल्प खोज्नुपर्छ ।